Cali Khaliif oo kamid noqonaya siyaasiyiinta dhulbahante ee muqdisho shirka oga furmayo | Waabaryay.com
Home ARIMAHA BULSHADA Cali Khaliif oo kamid noqonaya siyaasiyiinta dhulbahante ee muqdisho shirka oga furmayo
Cali Khaliif oo kamid noqonaya siyaasiyiinta dhulbahante ee muqdisho shirka oga furmayo
Warar Hordhac ah! Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Dowlada Somaliya ay riixayso in laysu- soo dhaweeyo Siyaasiyiinta & dhaqanka Beelaha Gobolka Sool taasi marka la unkona laguda-galyo in Gobolka Sool & Sanaag Siyaasiyiintiisa ay Madal Gogol xaadh u ah dhismaha Maamul hoosaad ku yeelanayaan Magaalada Xamar.
Laba maalin uun Dr Cali Khaliif Galaydh ayaa Magaalada Hargeysa ka sheegay inuu u safrayo Magaalada Xamar walow uu ka Gows- gaabsaday in uu Xamar u aadayo arrimo Siyaasadeed.
Hase ahaatee ilo Madax-banaan ayaa leh, Cali Galaydh wuxuu Safarkiisa ETHIOPIA ee uu sheeegay inuu laba maalin ku hakanayo uu la kulmayaa Ambassador Cabdixakiin Xaaji Cumar ( Camay) Safiirka Soomaaliya ee Ethiopia isla markaan ahaa M.K xigeenkii hore ee Puntland siyaasi reer Sool ah aamisana in Goboladaasi Maamul Madax’banaan loo dhiso!
Laakiin Warar kale ayaa leh! Dowlada Soomaaliya qorshaha ugu weyn ee ay Shirka Xamar laysugu keenayo ( Sool & Sanaag) ay tahay inay hesho Cududa Baarlamaanka Goboladaasi uga qaybgalaya( 2020 ) isla markaana aan Liiska Xubnahaasi Gacanta loo galin Puntland oo ah meesha Aas-aaska u ah Metelada rasmiga ah ee Goboladaasi.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Farriin Tacsi ah u diray shacabka iyo Madaxweynaha Jabuuti